The QuickTime components bụ kachanụ ụzọ nke na-akwado na ọkpụkpọ na-eji na a n'ụzọ na suut onye ọrụ. Onye ọrụ kwesịrị ego na URL ebe a-agbaso ka ichere na pụtara ìhè ọmụma banyere components na-anya na a kasị ọkachamara n'ụzọ. A nkuzi ka e dere ya iji pacify onye ọrụ nke mere na ọ na-akawanye ndị kasị mma ghọta ihe components (Perian) na ndidi gharazie ịba uru na n'ihu mmepe e kwụsịrị. Nke a ga-ekwe ka na onye ọrụ na-aghọ mmezi echiche mgbe a mpaghara a họọrọ.
Gịnị bụ Perian?
Site Theora ka Fraps, Perian ma ọ bụ Switzerland agha mma maka QuickTime bụ otu ugboro-eduga akụrụngwa na-akwado fọrọ nke nta niile formats na a nke ọma kọwaa n'ụzọ iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi chọrọ results. Onye ọrụ kwesịkwara ichere na a QuickTime akụrụngwa na kwụsịrị dị n'afọ 2011 ie 4 afọ azụ atụle VLC dị ka ndị kacha nhọrọ.
Ọ bụ a akụrụngwa na ozugbo kwere ka ndị ọrụ na-agba akaebe na ndị niile formats na-adịghị omenala egwuri site QuickTime n'elu Mac OS na-abụghị nanị na-egwuri ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi egwu mmepụta. Nke a oru ngo-a kwụsịrị na 2011 maka amaghị ihe mere Otú ọ dị na mmepe mara ọkwa na ndị isi koodu nke akụrụngwa ga-etinye na website na ndị ọrụ chọrọ ịzụlite ya n'ihu nwere ike na-koodu ma nwere ike n'ụzọ zuru ezu ahu nagide ya. Isi ihe ọmụma bụ ka a napụta ndị na-adịrị a nkuzi bụ dị ka ndị a:
Perian ma ọ bụ Switzerland Army Knife e mepụtara site The Perian Team n'afọ 2006. ọrụ ụtọ mbụ ntọhapụ na 29th September. Dabere na PPC na Intel n'elu ikpo okwu a mpaghara bụ otu n'ime mmemme iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi pụta chọrọ na mmekọrita na-esonụ formats ::
MS-MPEG4 v1, v2 na V3
Flash ihuenyo Video
Xiph Vorbis (ebipụta Matroska)
Snow wavelet video
DTS coherent Acoustics audio
Indeo 2, 3 na 5
E wezụga ndị a formats e nwere ọtụtụ ndị ọzọ sobtaitel na akpa formats na-akwado site na akụrụngwa ndị a nile na pụrụ n'ụzọ dị mfe anya na URL ebe zuru ezu n'akụkọ ihe mere eme nke akụrụngwa nwekwara e gwa ke n'elu-ekwe omume n'ụzọ.
E nwere ọtụtụ ma ama weebụsaịtị nke ka nọrọ n'ụlọ usoro ihe omume na ọ bụghị ike ịchọta ihe omume online. Ụfọdụ n'ime download URL bụ na onye nwere ike iji bụ dị ka ndị nke ga-emecha na-ekpughe na otú ewu ewu usoro ihe omume ọbụna taa bụ:
Ndị ọhụrụ version
The ọhụrụ mbipute nke Perian na bụ dakọtara na Mac OS X 10.4.7 na-akpọ ógbè dị ka 1.2.3 na e wepụtara na 23 July 2011 na nke ahụ bụ ikpeazụ oru ngo na na e weere site otu tupu oru ngo-emechi kpamkpam. The ọtụtụ ọhụrụ onwe mma nsụgharị nke usoro ihe omume ka dị online na iji ekpughe na needful a mere ọ na-gwara-ekwe nkwa na URL si na e kwuru n'elu na-soro na-ọhụrụ mmelite banyere usoro ihe omume. Onye ọrụ nwekwara ike ibudata ọhụrụ mmepe free ụgwọ site URL http://www.perian.org/ nke bụkwa ukara website nke usoro ihe omume. Nbudata na ọnụ ọgụgụ na ma ama weebụsaịtị na-egosikwa na ndị ọrụ ka na-amasị iji wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume iji hụ na ndị kasị mma kwere omume pụta na-site mgbe ọ na-abịa format akpọ ike nke QuickTime.
Olee otú iji Perian maka QuickTime?
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro ịkọwa eziokwu na onye ọrụ ọkọkpọhi kachanụ nkọwa na ya pụta:
1. Mgbe nbudata omume ọ bụ a ga-emeghe na-ebute usoro:
2. Ozugbo usoro ihe omume e arụnyere ọma ọ na-gwara restarted niile QuickTime metụtara omume n'ihu. Ọ dị mma na Malitegharịa ekwentị ahụ na usoro imelite niile components nke usoro ihe omume na ndị kasị mma n'ụzọ. Ozugbo QuickTime na-malitere otu ugboro ọzọ onye ọrụ ga-ahụ na ndị niile na components nke usoro ihe omume na-akpaghị aka ike na Perian nke nwekwara okokụre usoro.
Perian bụ kwa ochie maka QuickTime
Onye ọrụ kwesịrị ka-eme ka ụfọdụ na Perian e kwụsịrị 4 afọ azụ nwere uzo ozo na ha bụ ndị a na-ele anya n'ihi na site na ha. Isi ihe mere n'ihi na ọrụ na-achọ a ọhụrụ omume ndị dị ka ndị:
1. Nke ikpeazụ omume na e mepụtara mgbe discontinuation nke Perian dị nnọọ ukwuu ọkaibe na mfe iji na ịghọta mgbe ọ na-abịa n'ozuzu arụmọrụ.
2. The Perian-achọ ihe mwekota na isi omume ntụgharị QuickTime ọkpụkpọ nke bụ ihe bụzi ihe mgbe ochie onu dị ka e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na components na ahịa na-eguzo naanị na ọrụ ọ dịghị mkpa mwekota na QuickTime ọkpụkpọ-eme ka ha na-arụ ọrụ.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ ihe kasị magburu onwe ọzọ ka Perian na ikwu na eziokwu ahụ bụ na ọ na-adịghị metụtara QuickTime ọ bụla ùgwù na ọ na-eji ịdị ụfọdụ na onye ọrụ ọkọkpọhi pụtara atụmatụ na-nanị dabere na eziokwu na ojiji nke omume dị mfe na-eso.
1. Ọ na-akwado n'elu 150 formats nke pụtara na a onye ọrụ nwere ike fọrọ nke nta tọghata faịlụ site ọ bụla usoro ka onye nke ọzọ na-akwa ala.
2. E nwere a wuru na media center na ike ebunye ma nyefee faịlụ site na iji wireless teminoloji nke ọtụtụ ndị convertors enweghị.
> Resource> QuickTime> Perian bụ kwa ochie maka QuickTime!